उपमेयरको उपहार « Tuwachung.com
१. यसकारण राई समुदायले बाख्राका मासु खाँदैनन्
२. पिल्मो राई : मौलिक भाषा, संस्कृति, इतिहास भएको अलग जाति
३. ‘एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु नेकपा माओवादी केन्द्रको महाभूल’
४. युवा संघ नेपाल, नगर कमिटी इन्चार्जमा चाम्लिङ, भुजेललाई अध्यक्षको भूमिका
५. खसी होइन फर्सी
७. काँग्रेस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सभापतिमा राई अत्यधिक बहुमतले विजयी
८. दसैं हजुरबाको प्रतिविम्ब
९. केही पनि होइनन् भन्ने काँग्रेस खोटाङका नेताहरू नै सर्वधन राईसँग भयभीत
१०. यसकारण गाग्रो र अम्खोरा खाली राख्न हुँदैन
११. कुलुङ सभ्यताको नाम होइन, सोत्तो, पिल्मो र नाछिरिङ
१२. बिल काका
दीपेन्द्र राई	२०७८ भाद्र ३०, २२:१५
उपहार भनेको सानो, ठूलो हुँदैन । सियो उपहार पाए पनि महत्वपूर्ण ठानिन्छ । उपहारको सुन्दर पक्ष शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन । सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अर्खौलेमा अध्ययनरत धनकुमार मगरले त्यस्तै सुन्दर उपहार पाएका छन् ।
दैनिक ४ घटा ४० मिनेट रूखमै बसेर अनलाइन कक्षा लिँदै आएका मगरलाई सुन्दर उपहार कसले दिए होलान् ? पाउनेले उपहारमा के–के पाए होलान् भनेर कौतूहल जाग्यो होला । यसबारे थाहा पाउन तपाईंले समाचार पूरै पढ्नैपर्छ ।
‘४ घन्टा ४० मिनेट रूखमै बसेर अनलाइन कक्षा’ शीर्षकमा तुवाचुङ डटकममा धनकुमार मगरको पहिलोपटक समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि मगरको साहस र मिहिनेतको सराहना गरियो । सराहना सराहनामै सीमित रह्यो । उनको साहस र मिहिनेतले चर्चा पायो । तर, हलेसी तुवाचुङ नगरापलिकाका उपमेयर बिमला राईले १० कक्षामा अध्ययनरत मगरलाई शैक्षिक सफलताका शुभकामनामात्रै दिइनन्, धनकुमार मगर अध्ययनरत विद्यालयमै पुगेर उनलाई हौसलास्वरूप शैक्षिक सामग्री उपहारस्वरूप थमाइन् ।
समाचारको प्रभाव बलशाली हुँदोरहेछ । तुवाचुङ डटकममा पहिलोपटक समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम उनको समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भए । ‘भाइरल’ बनेका धनकुमार मगरले शैक्षिक सामग्री उपहार पाएको समाचार लेखिरहँदा पंक्तिकार खुसीले त्यत्तिकै पुलकित बनेका छन् । उनले पाएको उपहार पंक्तिकार आफैंले पाएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । उपहार पाउने व्यक्ति झन् कति खुसी होलान् भनेर ९८१६७८६८६३ मा धनकुमार मगरलाई पटक–पटक टेलिफोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । अन्तिममा पुनः एकपटक टेलिफोन गर्न जाँगर चलिहाल्यो । नभन्दै सम्पर्क भयो ।
उपमेयरबाट उपहार पाउँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोधियो । ‘सपनामा पनि चिताएको थिइनँ नि सर,’ उनले खुसी व्यक्त गरे, ‘उपप्रमुखजस्तो व्यक्तिबाट शैक्षिक सामग्री पाउँदा पढाइप्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ ।’
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–६ मंगलटार वडाध्यक्ष रमेश राउतसँगै अर्खौले पुगेकी उपमेयर राईले मगरलाई अजन्ता डिक्सनेरी, मोबाइलको पावर बैंक, झोला, पाँच थान कापी र मायाको चिनोस्वरूप हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको डायरी थमाइन् ।
‘उपमेयरको हातबाट शैक्षिक सामग्री पाउँदा जति खुसी छु,’ मगरले थपे, ‘त्योभन्दा बढी त उहाँले मलाई दिनुभएको शैक्षिक सफलताको आशिर्वाद अमूल्य लागेको छ ।’
उपमेयरबाट प्राप्त डायरी कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ ?
‘कविता लेख्छु सर,’ लगत्तै उनले भनिहाले, ‘दैनिकी पनि यसमै लेख्छु ।’
उपमेयर बिमला राई र धनकुमार मगरबीच भेटघाट कसरी भयो होला ?
‘उपमेयरज्यूले मलाई कल गर्नुभएको रहेछ । फोन लागेनछ,’ मगरले जानकारी गराए, ‘फोन सम्पर्क नभएपछि मेसेज पठाउनुभएको थियो । मेसेज पाएपछि कलब्याक गरें ।’
‘भाइ धनकुमार बाल दिवसको हार्दिक शुभकामना । प्रविधि सदुपयोग गर्दै तपाईंमा जुनखालको लगनशीलता छ, त्यसका लागि फेरि पनि बधाइ । फोन लागेन । मलाई कल गर्नुहोला ।
–बिमला राई, उपमेयर ।
उल्लिखित ‘मेसेज’ पाएपछि उनी तीनछक परे । नेपाली फन्टमा आएको मेसेज पढेपछि लगत्तै टेलिफोनमा दोहोरो वार्ता भयो । वार्ता भएपछि धनकुमार मगर हतार–हतार विद्यालय पुगे । उपमेयरबाट उपहार लिए । उपमेयर बिमला राईले पठाएको ‘मेसेज’ उनले सुरक्षित राखेका छन् ।
समावि अर्खौलेमा अध्ययनरत १० कक्षाका धनकुमार मगरले शैक्षिक सामग्री पाउँदा विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नवीन चाम्लिङले कस्तो अनुभूति गरे होलान् । निमित्त प्रधानाध्यापक चाम्लिङले भने, ‘उपमेयरज्यूले मिहिनेती विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुहुँदा धनकुमार भाइलाई हौसल थपिएको छ । यो सुखद पक्ष हो ।’
समावि कक्षा १० का दोस्रो विद्यार्थी उनी भलिबलमा समेत अब्बल खेलाडी हुन् ।
केही पनि होइनन् भन्ने काँग्रेस खोटाङका नेताहरू नै सर्वधन राईसँग भयभीत
दिक्तेल (खोटाङ) । ‘केही पनि होइनन् भन्ने काँग्रेस खोटाङका नेताहरू नै सर्वधन राईसँग सबैभन्दा बढी
स्वास्थ्य संयोजक रामकुमार भगतमाथि विप्लव माओवादीको केरकार
हलेसी (खोटाङ) । विप्लव माओवादीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामकुमार भगतलाई १ घन्टा ३०
हिँडडुल गर्ने रूख
त्यतिबेला मानिस र जनावरमात्र होइन, रूखबिरुवासमेत हिँडडुल गर्थे । कुराकानी गर्थे । हिजोआज जस्तै त्यतिबेला
४ घन्टा ४० मिनेट रूखमै बसेर अनलाइन कक्षा
हाडेको रूख । त्यही रूखमा करमको भर्याङ ठडिएको छ । रूख चढ्न सात खुड्किलो पार
पिल्मो राई : मौलिक भाषा, संस्कृति, इतिहास भएको अलग जाति
नेपालको उत्तर-पूर्वी पहाडी भेगलाई विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिको उद्गम भूमि भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
युवा संघ नेपाल, नगर कमिटी इन्चार्जमा चाम्लिङ, भुजेललाई अध्यक्षको भूमिका
दुर्छिम (खोटाङ) । युवा संघ नेपाल, हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटी इन्चार्जमा सुवास चाम्लिङ चयन भएका
खसी होइन फर्सी
दसैंमा जखमले खसी खाने महँगो शुभकामना दिने चलन छ । बुझेर हो कि नबुझेर, फर्सी